Bacda Shiinaha Kaabsalka RPET Bag 100% Qalabka Dib loo Isticmaalay Pocket Sport Style Running Bag Portable Cool Fashion boorsada boorsada loogu talagalay warshad unisex iyo alaab-qeybiyeyaal | Changlin
Bacda Fibreynta dhirta
Bacda Straw Bag
Bacda cudbi & linenka ah
Bacda Waraaqaha ee Substainable
Dib loo rogay Bacda EVA
Bacda TPU-da ee xumaanta
PU Waxyaabaha Pocket Sport St ...
Eco-saaxiibtinimo dhalaalaya PU dhalaalaya ...
Eco-friendly PU qurxinta ba ...
Eco-saaxiibtinimada u nugul ...
Bacda Marawaxadaha Qaranka ...
Bacda RPET Bag 100% Waxyaabaha Dib loo Isticmaalay Pocket Sport Style Running Bag Boorsada farriinta qabow ee casriga ah ee loogu talagalay unisex
Qaabka loo yaqaan 'RPET' ayaa ah muuqaal qarsoodi ah oo umuuqda mid u qurux badan askarta.
Dulmarka Wax soo saarka:
Waxyaabaha: JAWAAB Miisaanka:
Cabir: 36.5L * 9.5W * 17Hcm Xiritaanka: jiinyeer
Goobta Asalka: GUA, CN Dekedda: Shenzhen ， GZ, HK
MOQ ： 5000 Kartoo: La aqbalay
Codsiga: dukaameysiga, orodka, maalin kasta
Faa'iidada: Daboolid, Portable, Fashion, functional, biodegradable
Samee 2017, Changlin waa warshadda laanta ee Jiafeng Caaga Products CO., LTD oo in ka badan 20 sano khibrad u leh sameynta bacaha.Raggan waa RPET 100% dib loo cusbooneysiin karo.Qalabku ma sahlana in la qoyo.Bisside, waa waxtar badan nolol maalmeedka iyo moodka ragga iyo dumarka.
Micro Side View
Habka daboolidda ayaa kordhinaysa dareenka qabow. Bacda dhexdeeda, waxaa jira lakab kale oo yar oo leh xirmo jiinyeer ah si loo dhigo kaarka bangiga ee muhiimka ah, iwm oo ah mid aad wax ku ool u ah naqshaduna tahay mid naxariis leh.
Awood ahaan, Waa ku filan tahay dadka markay ordaan iyo markay wax adeeganayaan. Cabbirkiisu waa 36.5L * 9.5W * 17Hcm kaasoo dhigi kara taleefankaaga, salka biyaha, cadka, iwm
Madaxa laba-geesoodka ah ayaa ku habboon dadka leh dabeecad kala duwan.
Naqshaddani waa mid naxariis leh oo ku habboon dadka leh qaabab kala duwan.Waa sahlan tahay in la qaado oo la qaado.
Shirkadeenu waa xirfadlayaal bacaha soo saara. Iyadoo ruuxda "u heellan, hal-abuurnimo, wada shaqeyn, shaqo-adag" iyo qaabka shaqada ee ah "hufnaan, gudasho, isgaarsiin, heer sare", dhammaan shaqaaluhu waxay siiyaan macaamiisha hore iyo kuwa cusubba Waxaad ku raaxeysan doontaa kooxda ugu xirfadda badan ee kuu adeegi doonta!
Hore: RPET leh daabacaadda buuxa ee bacda xirxirida bacda ubax shaambada la qaadan karo qaabka qolof kiish
Xiga: Bacda RPET Bacda 100% Waxyaabaha Dib loo warshadeeyay Pocket Sport Style Running Bag Boorsada Boorsada Qabow ee Casriga ah ee dharka loogu talagalay unisex
Adeegga Customize ee Changlin waxaa ka go'an inay soo saarto bacaha qurxinta ee tayada gaarka ah leh, si loo dammaanad qaado meheraddaadu inay ka wanaagsan tahay markasta.
Kooxdayadu waxay si dhaw ula shaqeynayaan si loo abuuro xalal wanaagsan, iyadoo laga faa'iideysanayo qalabka dib loo cusbooneysiin karo iyo kuwa dib loo cusbooneysiin karo oo leh farsamooyinka ugu fiican. Waxaan abuuri karnaa cabir kasta iyo qaabkasta oo ah boorsooyinka la isku qurxiyo, noocyada kala duwan ee walxaha waara, daabacaadda xasiloon, naqshadaha hal-abuurka leh, sida ku cad faahfaahintaada.
Iyada oo waxyeelada deegaanka ay sii kordheyso sida warshaduhu u korayaan, iyo aragtida horumarka waara, hadda agab aad u badan oo deegaanka u habboon ayaa loo adeegsaday noocyo kala duwan oo halkan ah: Cudurka dabiiciga ama Cudurka dabiiciga ah iyo linenka ayaa meel walba lagu yaqaan, Qalabka RPET wuxuu ku yaal jidka, halka Recycled EVA ama Recycled TPU ay noqon doonto isbedelka cusub. Maaddooyinka fiber-ka cusub ee dhirta sida dharka cananaaska iyo dharka mooska ayaa la soo saaray oo laga faa'iideysanayaa. Changlin waxaa ka go'an inay u fidiso macaamiisheenna alaabooyin cusub oo casri ah, soo saarista alaabooyin badan oo ilaalinta deegaanka ah, iyo ku biirinta xooggeena u gaarka ah ilaalinta deegaanka.
Fashion PU qurxiyo bac qurxiyo packagi vacation ...
Midabo Polyester Bag Qabashada Xiritaanka C waara ...
Dambiisha TPU Cosmetic Eco-friendly Degradable Iride ...
Eco-friendly dib u warshadaynta Eva 3D eyelets wax c ...
Cotton Canvas Bag Travel qurxiyo Bag qurxinta wi ...
Bacda suufka ah ee loogu talagalay adeegsiga qurxinta qurxinta
Suuf & Gogol
NO167 wadada labaad ee Gaoxin, Degmada Gaoxin, Heyuan, Shiinaha